Bichar Khabar » आत्मनिर्भर र सरकारको भूमिका
आत्मनिर्भर र सरकारको भूमिका
15 Nov 2015 11:11:11 AM | No Comments
नेपालको संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा भएका ६०१ सदस्यहरु मध्ये ९०% सदस्यहरुको हस्ताक्षर गरी जारी भएको संविधानले विश्वलाई चित्त बुझाएपनि केही नेपालीहरुलाई चित्त बुझाउन सकेको छैन। जसको कारणले आज नेपाल अर्धजिवित अवस्थामा रहेको छ। नेपाल सरकार अझै स्पस्टका साथ भारतको नाकाबन्दीले देश आक्रन्त भएको छ भन्न सक्दैन। आफै घोषणा गर्छ तर आफ्नो वचन पुरा गर्न सक्दैन। अनि आफ्नो सरकारको पुर्णता दिनको लागि ६ जना उपप्रधानमन्त्री सहित जम्मा २६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तारबाट संविधान पछि निर्मित सरकार यत्रतत्र आलोचित भएको छ जसरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला आफ्नै दलभित्र र बाहिर आलोचित देखिनुभएको छ। यी दुवै घटना नेपाल र नेपालीको लागि सोभनिय छैनन। यी दुवै व्यक्तित्वलाई सामान्य रुपमा हेर्दा आफ्नो सत्ता र कुर्चिको लागि देश र जनतालाई बन्दक राख्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि जे पनि गर्न तयार भएको पुष्टी भएको छ ।
नेपाल सरकारले संविधान जारी गर्दाको ९०% समर्थनलाई , आज देशलाई निकास दिएर पुष्टि गर्नुपर्छ। यो दिन आउनमा हिजोको दिनमा संविधान सुझावको लागि जनताको अभिमत बुझ्नको लागि लगिएको तर उनिहरुको आवाजलाई संविधानमा नसमेटिएकोले नै हो। दोश्रो कुरा भारतको नेपाल प्रतिको गिद्धे नजर पनि हो। नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले यहाँका प्रत्यक निर्णय नेपाली दल तथा नेपाली मिलेर गर्नुपर्छ नकि कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा परी उनिहरुको इच्छा नेपालमा नलादियोस। नेपालका नेताहरुले हिजो ०६२ मा भारतमा भारतीय नेतालाई साक्षी राखि जुन सम्झौता गरे जसले गर्दा आफ्नो स्थान भारत खोजिरहेको छ। यो उसको नजरमा सहि भए पनि नेपाली चस्माले दोशी नै देख्छ। आफ्नो मान मर्दन राख्नको लागि भारतले गरिराखेको नाकावन्दी तुरुन्त हटाई , भारत जसरी आकारमा ठूलो छ त्यसरी नै दिलमा पनि छ भनि नेपालको आन्तरिक समस्या हल गर्न नेपाललाई नै जिम्मा दिनुपर्छ ।
नेपालका राजनितिक दलले जे गरे पनि हामी नै हौ भन्ने हो भने आज मधेशमा जलेको आगो किन निभाउन सकेका छैनन? किन कि प्रतिनिधि र जनताको बिचमा पनि केहि बुझाइमा फरक छ। आजको माग भनेको त्यो ग्यापलाई सुन्यान्तरमा पुर्याउनु हो। ती ९०% जनमत हामीसंग छ भन्ने दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई उतारी सदभाव र्याली वा अन्य कुनै तरिकाले वर्तमान समस्याको समाधान निकाल्नु पर्छ र मधेशको नेतृत्वकर्ताले पनि आफुलाई मधेशी मात्र नभनेर आफुलाई नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुपर्छ र आफ्नो समस्या समाधानको लागि भारतलाई गुहार्नु हिजोका नेताले गरेको भन्दा पनि ठूलो क्षति आफैलाई पुग्नेछ र भावी सन्ततीको नजरमा धिक्कारको पात्र बन्नुपर्ने छ। भोलिको क्षतिलाई आझै बुझिदिएमा समस्या तुरुन्त हल हुनेछ। जसले गर्दा सिङ्गो नेपाल अनि भारतलाई पनि फाइदा हुने छ। आजको आवश्यकता भनेको सवैले जित्ने खेल खेल्नु पर्छ जुन चाहि सदभावको हुनेछ।
बजारमा खाद्यान्नको अभाव छ तर सरकारलाई यसको अत्तोपत्तो छैन। जहातही कालोवजारी बढेको छ। दशै अगाडि रु १२५ पाईने सनफलावर तेल आजका दिनमा व्यापारीले रु २२५ मा बेचिराखेका छन। पेट्रोलको लागि सरकाले लटवाइजका गाडि तथा मोटोरसाइकललाई पेट्रोल पम्पमा गएर पेट्रोल लिनको लागि सुचना जारी गर्यो तर आधा आधि मोटोरसाइकल र गाडीले मात्र पेट्रोल पाएका छन। अरु रित्तो हात आधा रातमा फर्कनु परेको छ।अव सरकार जवाफ देउ गाडी तथा मोटोरसाइकले सवारी कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? पेट्रोल पाइदैन पेट्रोल पम्पमा तर लिटरको रु ५०० को आसपासमा तिर्दा वजारमा छ्यापछ्याप्ति पाइन्छ। यसको निराकरण गर्ने को? सरकार आफ्नो उपस्थिती देखाउ। सिंहदरवार र बालुवाटार मात्र नेपाल होइन।त्यहाको आपूर्तिले नेपालीको भोक र आवश्यकता पुरा हुदैन। खोक्रो राष्ट्रवादको नाराले मात्र हुदैन। यहाँ जनताले महशुस गर्ने राष्ट्रवाद चाहिएको छ, त्यसको अनुभुति गर्न सर्वसाधारणले पाउनु पर्छ। विदेशी मित्र राष्ट्रले भारतीय नाकावन्दीले गर्दा नेपालमा मानविय समस्या आउन सक्छ भन्ने तर नेपाल सरकर खुलेर नाकवन्दी हो भन्न सक्दैन। किन ? किन कि उ त्यहि १०% संग डराइराखेको छ अनि भारतसंग पनि । राम्रो र जनपक्षिय काम गर्नको लागि नडराउ नेपाली तिम्रो साथ दिनेछन। तर तिमिले सुरुकै दिनमा खुट्टा कमायौ, ६-६ जना उप-प्रधानमन्त्री बनायौ तर शैक्षिक योग्यतालाई लत्यायौ। यसैले पनि तिमि लाचार भएका छौ। यसमा होस पुरयाउ । हिजो राजालाई गाली गर्नेहरु, आज आफ्नो सामर्थ्य देखाउ। ०४६ को नाकावान्दीमा अहिलेको जस्तो वेहाल भएको थिएन। भोलिका दिनको लागि विकल्प पनि खोज। मधेशको मागलाई पुरा गर्ने क्षमता छैन भने सङ्घियतालाई निलम्वन गरिदिए हुन्छ। वर्तमान सरकरले आफ्नो मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको उल्लङ्घन भैसकेको छ। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमद्धेबाट समाबेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ’ तर वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषदमा २६ जना सदस्य रहेको छ र वर्तमान संविधानको खिलापमा देखिएको छ । जहा प्रदेशको कारणले देश आक्रन्त वन्छ, जनता दिनानुदिन पिडित हुन्छन भने किन चाहियो सङ्घियता? देशलाई निकास र विकाश अनि जनतालाई शान्ति र वातावरण चाहिएको छ। आट गर देश अगाडि बढ्ने छ। देशलाई उखानतुक्का, र आकाशमा महल चाहिएको छैन । नेपाललाई अर्धजिवितको रुपमा नछोड यसलाई पूर्ण सामार्थ्यको साथ जिउन देउ। सवैले आफुलाई नेपाली भएको गरौव महशुस गरुन, रोदन पिडाबाट मुक्ति पाउन, अनि सवै नेपाली समवृद्धीको बाटोतिर लम्कने अवसर प्राप्त होस तव मात्र नेपाल आत्मनिर्भर हने छ अनि आफ्नो झुपडिमा गाँस, वास र कपासको समधान स्वतह हुने छ। यसमा कसैको दुइमत नहोला ।
-चन्द्र कान्त पण्डित